बधाई ! समता स्कुलकी अस्मिताले पाइन स्वीजरल्यान्डमा दुई करोड बराबरको छात्रवृत्ति – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/बधाई ! समता स्कुलकी अस्मिताले पाइन स्वीजरल्यान्डमा दुई करोड बराबरको छात्रवृत्ति
काठमाडौं । मासिक रू एक सयमा नेपालको सस्तो विद्यालय समता स्कुलमा पढ्दै आएकी अस्मिता अधिकारी विश्वको महंगो स्कुलमध्ये एकमा पढ्न पाउने भएकी छन् । संसारको महंगोमध्ये एक र सुविधायुक्क्त आइगलन कलेज स्वीजरल्याण्डमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भएकी हुन् । जोन कर्लेटले १९४९ मा स्थापना गरेको आइगलन विश्वकै विशिष्टमध्येको एक हो ।सानैदेखि तीक्ष्ण बुद्धिकी अस्मिता कक्षा १० मा पढ्दा आइगलन कलेजका संस्थापक प्राध्यापक रिचर्ड म्याकडोनाल्ड नेपालको समता स्कुल आएका थिए ।
छोरीलाई सस्तो स्कुल भनेर समता स्कुलमा पढाएको थिएँ ।” ३.९ जीपीए ल्याएकी उनी १० कक्षामा हुँदा रिचर्ड म्याकडोनाल्डले मौखिक र लिखित परीक्षा लिएका थिए । करिब पाँचसय जनामा लिइएको परीक्षामा धेरैले भविष्यमा पाइलट, डाक्टरलगायत बन्ने भनेका थिए भने अस्मिताले म्युजिक भनिन् । म्याकडोनाल्डले सबैको फरक सोचाइकाबीच आएका मौखिक र लिखित कागज लगेका थिए । त्यसमध्ये अस्मिता छानिएकी हुन् । उनी सो कलेजमा जीसीएसइ पढ्ने भएकी छन् । अस्मितालाई स्वीजरल्याण्ड पढ्न जाने कुरा पहिला नै थाहा थियो ।
तर एकाबिहानै रूटिन अफ नेपाल बन्दमा उनको नाम आएको रहेछ । विश्वको महंगो कलेजमध्येको एक कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाएकोमा २ करोडको बधाई भनेर । उनले खुसी व्यक्त गर्दै भनिन्, “मैले नेपालमा कानुन विषय पढ्ने सोचेकी थिएँ । तर यस्तो राम्रो मौका पाएकी छु । खुसी छु ।”समता स्कुल तथा फाउन्डेसनले सन् २००० बाट अंग्रेजी माध्यममा नर्सरीदेखि डिग्रीसम्म मासिक सय रुपैयाँमा पढाइ सञ्चालन गर्दै आएको छ । समता स्कुलका संस्थापक उत्तम सञ्जेलले समता स्कुलको बारेमा सबै जानकारी गराउँदा रिचर्ड म्याकडोनाल्ड धेरै खुसी भएका थिए ।
पछि प्रत्यक्ष उनी आफैँ काठमाडौं आएका थिए ।समता स्कुलका संस्थापक उत्तम सञ्जेलले आइगलनमा पढ्दा वार्षिकसहित सबै शुल्क जोड्दा दुईकरोड हुन आउने बताए । “यो समताको सौभाग्य हो अबदेखि बर्षेनी एकजना विद्यार्थी त्यहाँ छात्रबृत्तिमा पढ्न जान पाउँनेछन् । बर्सेनी एकजना विद्यार्थीले त्यस्तो अवसर पाउनेछन् ।”
कसैले शव उठाउन त के घर सम्म पनि जान नमानेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष आँफैले संक्रमितको शव उठाई व्यवस्थापन गरे !